ukujongana: inqanaba le-samsung u pro bluetooth i-earphone ufumana isaphulelo esikhulu se-65% kwi-amazon
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Idili: Inqanaba le-Samsung le-Pro leendlebe zeBluetooth zifumana isaphulelo esikhulu sama-65% kwiAmazon
Inqanaba le-U Pro iBluetooth engenazingcingo kwi-earphone zentloko yazo zenze idilesi yazo eMelika kunyaka ophelileyo ngoJuni. Kwiinyanga ezilishumi emva kokukhutshwa kwabo kwintengiso, ii-earphone ze-Samsung kunye neeapos ziye zancitshiswa kakhulu kwiAmazon.
Nangona bahlala bethengisa nge- $ 99.99, iAmazon ngoku ibonelela ngeNqanaba U Pro ii-earphone ezingenazingcingo nge- $ 34.00 nje. Oko & apos; sikhulu sama-65% isaphulelo kwixabiso lentengiso. Nangona kunjalo, wena & apos; Kuya kufuneka uhlawule ukuhambisa ngenqanawa kuba iAmazon ibonelela ngesi sikhuthazo kwiiodolo ezingaphezulu kwe- $ 35.
Kukwafanelekile ukuba sikhankanye ukuba ngelixa iiSamsung kunye neeApos zenqanaba U Pro iBluetooth yentloko engenazingcingo ifumaneka ngemibala emininzi (emnyama, ubhedu, luhlaza okwesibhakabhaka, nemfusa), zona kuphela ezimnyama zitshiphu kakhulu. Imodeli yobhedu ixabisa i-58.97 yeedola, ngelixa iinguqulelo ezimfusa neziluhlaza zifumaneka nge $ 54.72 kunye ne- $ 70.99 ngokwahlukeneyo.
Inqanaba le-Samsung le-Pro ye-Bluetooth engenazingcingo ezindlebeni ye-earphone ene-UHQ Audio (Umgangatho ophezulu weaudio ephezulu) yesandi esiphakamileyo kwaye bayaphambana kwaye bayabila. Ngokuka-Samsung, kufuneka banikezele ukuya kuthi ga kwiiyure ezili-9 zexesha lokuthetha okanye ukuya kuthi ga kwiiyure ezingama-300 zokulinda.
Inqanaba leSamsung le-Pro leendlebe ezingenazingcingo
Olona hlobo lwekhamera lusebenzayo kwi-Nexus 5x
i-sam g988u 128 gy xcvr sgl
galaxy s5 yeetro pcs
I-T-Mobile ngoku ivavanya i-Android 8 Oreo ye-Samsung Galaxy S8 kunye ne-S8 +
Ungayitshintsha njani i-Samsung kunye ne-apos; s injini yokubhala-ukuya-kwintetho enamazwi kaGoogle kunye neeapos zeTTS
I-AT & T iqala ukukhupha itekhnoloji enokuthi itshintshe umdlalo we5G
I-AirPods eziMnyama: ngaba zikhona kunye nendlela yokuthenga ii-AirPods okanye ii-AirPods Pro ezimnyama
UApple ukhupha uhlaziyo 'olubalulekileyo' lokhuseleko ku-iOS 12.5.4 kwii-iPhones ezindala, ii-iPads, kunye nokuchukumisa i-iPod